Kooxda Liverpool oo dooneysa iney soo qaadato weeraryahanka u haray kooxda PSG. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Liverpool oo dooneysa iney soo qaadato weeraryahanka u haray kooxda PSG.
Kooxda Liverpool oo dooneysa iney soo qaadato weeraryahanka u haray kooxda PSG.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 2:17 PM Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa galay tartanka loogu jiro saxiixa Edinson Cavani.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain ayaa si xoogan loola xiriirinaayey in uu u dhaqaaqayo Premier League.
Kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal ayaa dhamaantood aad loola xiriirinayay laakiin website ka TuttoMercatoWeb ayaa daabacay in kooxda Liverpool ay noqotay kooxdii ugu danbeysay ee ku soo biiratay loolanka loogu jiro saxiixa xiddigan.
Jurgen Klopp oo doonaya inuu xoojiyo weerarkiisa ayaa suuqa ugu jira gool dhaliye la isku halayn karo oo xilli ciyaareedka dambe kooxda goolal u dhaliya isaga oo khaati ka taagan dhaawaca Gool dhaliyaha 1-aad ee kooxda Daniel Sturridge.